प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वासको मत लिँदै, यस्तो छ अंकगणितNepalpana - Nepal's Digital Online
प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वासको मत लिँदै, यस्तो छ अंकगणित
नेपालपाना श्रावण ३ २०७८
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आजै विश्वासको मत लिने भएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको दोस्रो बैठकमा उनले विश्वासको मत लिन लागेका हुन् ।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सङ्घीय संसद् सचिवालयमा प्रधानमन्त्री देउवाले सदनबाट विश्वासको मत लिनेसम्बन्धी प्रस्ताव दर्ता गराएको संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले बताए ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनासँगै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवाले संवैधानिक प्रावधानअनुसार विश्वासको मत लिन लागेका हुन् । उनी गत असार २९ प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।
यस्तो छ अंकगणित
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक समेत बोलाएका छन् । देउवालाई विश्वासका मतका लागि प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको २ सय ७१ सांसदमध्ये १ सय ३६ जनाको समर्थन चाहिन्छ ।
फ्लोर क्रस गरेर देउवालाई विश्वासको मत दिने सांसदलाई कारवाही गर्न मिल्छ?
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले गरे देउवालाई टेलिफोन, के भयो कुराकानी?
देउवालाई विश्वासको मत दिएर पार्टीका केही नेताहरुले अक्षम्य अपराध गरे : महासचिव पोखरेल
श्रावण ३, २०७८ आइतवार १२:५४:०९ बजे : प्रकाशित
कांग्रेसको २१ जिल्लाबाहेकको परिणाम आयो, देउवा स्पष्ट बहुमतमा